Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 05/06/2020)
Kutheni na ke ngololiwe sihamba? umdla Train uya kuthoba, esebenzayo kunye inikeza i inkalo zentlalo ukuba ezinye iindlela zothutho nje awukwazi ayifani. kunjalo, babehamba onokukhubazeka kungaba nzima kwabanye. Oku akuthethi ukuba awukwazi kusebenzisa fun, nakuba. Eli nqaku inika iindawo ezithile ezingundoqo ekufuneka xa uhlela yakho uhambo ngololiwe ngoko uhamba nokhubazeko eYurophu kufaka xinzelelo.
Yeyiphi Uloliwe ukuba Thatha kwi Gcina-A-Train ukuba Ukuhamba nokhubazeko?
Ukuhamba Special yinkonzo ukukhubazeka inokwahluka ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, ngokuxhomekeka kwimiba eliqela kwingongoma; zimoto kwi uloliwe yakho ethile, izakhiwo kule ezahlukeneyo izitishi ngaloo ndlela lakho yaye ipolisi yakho yenethiwekhi on ungeno.
Hlola itikiti lakho kunye hambo ngononophelo xa usifumene. Qinisekisa ukuba bakholisekile imigaqo-nkqubo kunye namalungiselelo ukuze ningabi bamangaliswe kwi stopovers zakho ezahlukeneyo (ingakumbi xa uhambela phesheya).
Hlala kwezona ndawo olufikelelekayo wedolophu. Le yenye yezona ndawo inzima kokucwangcisa uhambo lwakho ngololiwe xa Ukuhamba nokhubazeko. Inokuba bafumana kwihotele enkulu zifikeleleke, kodwa uya kufumana xa uhamba / senze ucango lwangaphambili? Ingaba kukho iinduli ngezinyuko kuzo zonke iindlela? kuya kufuneka ukuba ziqhube phezu cobblestones? Ingaba kukho zokudlela zifikeleleke kufutshane? Kubalulekile ukuba uphando ebumelwaneni yehotele. Ungasebenzisa Google Maps Street View ukuze ufumane lowo yelizwe, ngoko email ehotele ngemibuzo yakho.
Ungakwazi ukubhukisha oololiwe amatikiti bakho phakathi oololiwe fastest eYurophu on Gcina-A-Train Phantse yonke indawo afuna ngasentla 3 imizuzu, e angamanani amatikiti etreyini amazinga sesikhululekile iimali ukubhukisha owakhe!